Ngenxa yokukhula ngokukhawuleza kwemfuno yesicelo se-CIS yomenzi woluvo, ulawulo lwe-chip ye-PMIC, i-chip yesazisi yeminwe, i-chip ye-Bluetooth, i-chip ekhethekileyo yememori, njl njl. Ngokwe-Securities Times, ngokusungulwa ngokuthe ngcembe kweefowuni eziphathwayo ze-5G, ibango ...
Iqela leBrocade lityhila i-China-Central kunye ne-Mpuma ye-Yurophu yezoQoqosho nezoRhwebo kunye ne-Chengdu Special Cloud Fair
Ngo-Okthobha i-28th, u-Chengdu ubambe ngempumelelo i-China-Central kunye ne-Mpuma ye-Yurophu yezoQoqosho nezoRhwebo I-Fair Fair kunye ne-Chengdu Special Cloud Fair. Esi siganeko siyinxalenye ebalulekileyo ye-2020 China-Europe International Trade Digital Exhibiti ...
Emva kokudibanisa ikhompyuter okanye iTV ngentambo ye-HDMI, i-TV ayiphenduli
1. Nceda ujonge ukuba ijelo lomqondiso we-TV lihlengahlengisiwe na ku- "HDMI igalelo", qala ucofe iseto le-TV. Umendo: Imenyu-yokufaka-isiginali-ujongano lomthombo, khetha ngokwentambo ye-HDMI kunye nesokethi yeTV (kunokubakho i-1-5 yeemveliso ezahlukeneyo). 2. Ngokubanzi, ikhompyuter iyasilela ukwahlulahlula ...